तिहारकै मुखमा बैतडीबाट आयो यस्तो दुःखद खबरः बस दुर्घटनामा नाै जना रहेनन्, घाइतेहरूकाे यस्तो बिजोग! – PathivaraOnline
Home > समाचार > तिहारकै मुखमा बैतडीबाट आयो यस्तो दुःखद खबरः बस दुर्घटनामा नाै जना रहेनन्, घाइतेहरूकाे यस्तो बिजोग!
बैतडी, कात्तिक २८ । बैतडीको पाटनमा बस दुर्घटना हुँदा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । दार्चुलाको गन्नाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको ना ५ ख ५१४१ नम्बरको बस बिहीबार राति साढे १० बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो । बस सडकबाट ६०० मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । मृतकमध्ये सात जना पुरुष र दुई जना महिला छन् ।
मृत्यु हुने मध्ये केहीको पूूर्ण पहिचान खुलेको छ भने केहीको ठेगाना खुल्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।मृत्यु हुनेमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ८ की कृतिका कार्की, बैतडीको डोगडाकेदार गाउँपालिकाका ६ का प्रहरी जवान रण बहादुर चन्द, करन ऐर रहेका छन । ठेगाना नखुलेका नरेन्द्र चौधरी, जगन्नाथ ओझा, बिमल बडु, तारा गिरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु भएका अन्य दुई जनाको भने सनाखत हुनसकेको छैन ।
दुर्घटनामा परी घाइते भएका ३४ जना मध्ये गम्भीर घाइते सात जनालाई धनगढी रेफर गरिएको छ । बाँकी २७ जनाको डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिए। दुर्घटना कसरी भएको हो भन्नेबारेमा अझै यकिन भइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटना कसरी भएको हो भन्नेबारेमा अझै यकिन भइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ । बस बैतडीको दोगडाकेदार–७ खोचलेकका वीरेन्द्र कार्कीको रहेको बताइएको छ । साहुु आफैँ चालक रहेका र उनीसमेत घाइते भएका छन् । मृतकमध्ये सात जना पुरुष र दुई जना महिला छन् ।
भारतले भन्यो: लिम्पियाधुरा–गुन्जी–कालापानीमा नेपालीलाई पस्न नदेऊ (पत्र सहित)